Pope Francis na-agwa ndị na-eto eto nke Medjugorje: kwe ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụrụ mmụọ gị | Ilblogdellafede
Pope Francis na-agwa ndị na-eto eto nke Medjugorje: kwe ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nwee mmụọ nsọ
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 3, 2020 Ọgọstụ 4, 2020
Pope Francis gbara ndị na-eto eto gbakọtara na Medjugorje ka ha imitateomie Nwa agbọghọ nwanyị amaghị nwanyị site n'ịhapụ onwe ha nye Chineke.
O buputara arịrịọ ahụ na ozi emere na nzukọ ndị na-eto eto nọ na Medjugorje kwa afọ, nke Archbishop Luigi Pezzuto, onye nunolic nuncio de Bosnia na Herzegovina.
Poopu kwuru na ozi ahụ ezigara na Croatian ma ziga ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Holy See na Ọgọst 2, .
“Ike nke 'Ee' ya 'Ka o dịrị m' na o kwuru n'ihu mmụọ ozi ahụ, na-atọ anyị ụtọ oge niile. "Ee" ya putara isonye na itinye ihe ojoo n’enweghi nkwa obula karia imata onye buru nkwa a. 'Lee ohu nke Onye-nwe' (Luk 1:38), ihe atụ kachasị mara mma nke na-agwa anyị ihe na-eme mgbe mmadụ ji onwe ya nyefee onwe ya n'aka Chukwu ”.
"Ka ihe atụ a kpalie gị ma bụrụkwa ụkpụrụ gị!"
Pope Francis nabatara ndị njem ndị Katọlik gaa Medjugorje na Mee 2019, mana emeghị mkpebi banyere izi ezi nke ngwa Marian ndị ebubo ebubo na saịtị ahụ kemgbe 1981.
Ozi ya gwara ndị ntorobịa gbakọtara na ebe ekwuputaghị akụkọ mkpesa ahụ, nke malitere na June 24, 1981, mgbe ụmụaka isii nọ na Medjugorje, obodo bụ mgbe ahụ ndị Kọmunist Yugoslavia, malitere inwe ihe ịtụnanya na ha kwuru na ọ bụ akụkọ nke nwanyị a gọziri agọzi. Maria.
Dabere na "ndị na-ahụ ụzọ", ihe ngosi ndị ahụ nwere ozi udo nke ụwa, oku maka nchigharị, ekpere na ibu ọnụ, yana ụfọdụ ihe nzuzo ndị merenụ ga-emezu n'ọdịnihu.
Ọhụụ ndị ahụ azọrọ kwuru na saịtị ahụ na Bosnia na Herzegovina abụrụla ihe kpatara esemokwu na mkparịta ụka, ebe ọtụtụ na-enubata n'obodo ahụ maka njem na ekpere, ụfọdụ na-ekwu na ha enwetala ọrụ ebube na saịtị ahụ, ebe ndị ọzọ na-ekwu na ọhụụ ahụ abụghị eziokwu.
N’ọnwa Jenụwarị afọ 2014, kọmitii Vatican mechiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ iji mata ihe gbasara nkuzi na ịdọ aka na ntị nke Medjugorje ma were akwụkwọ gosiputara ọgbakọ nke Doctrine of the Faith.
Mgbe ọgbakọ nyochachara nsonaazụ ndị ọrụ a, ọ ga-ewepụta akwụkwọ na saịtị ahụ, nke a ga-ewepụtara ya poopu ahụ, onye ga-eme mkpebi ikpeazụ.
N’ozi o zigaara ndị na-eto eto na 31st Nzukọ Nzukọ Ndị Ntorobịa Mba 1st na Medjugorje, nke na-ewere ọnọdụ site na 6 ruo XNUMX August, Pope Francis kwenyesiri ike: “Nzukọ ndị ntorobịa kwa afọ na Medjugorje bụ oge ekpere, ntụgharị uche na Nzukọ ezighi ezi, oge na-enye gị ohere izute Jizọs Kraịst dị ndụ, n'ụzọ pụrụ iche n'ememe nke Nsọ dị nsọ, na nkwanye ugwu nke Sakrament dị Nsọ na Sakrament nke Mmekọ ”.
“N'ụzọ dị otú a, ọ na - enyere gị aka ịchọpụta ụzọ ndụ ọzọ, nke dị iche na ọdịbendị nwa oge nyere, nke ọ nweghị ihe ọ bụla na - adịgide, ọdịbendị nke maara naanị ihe ụtọ dị ugbu a. N’ime ọnọdụ ụdị nnabata a, ebe o siri ike ịchọta azịza eziokwu na nke doro anya, usoro isiokwu a bụ “Bịanụ hụrụ” (Jọn 1:39), okwu ndị Jizọs jiri gwa ndị na-eso ụzọ ya, bụ ngọzi. Jizọs na-ahụkwa gị, na-akpọ gị òkù ka ị bịa nọnyere ya ”.
Pope Francis gara Bosnia na Herzegovina na June 2015 mana ọ jụrụ ịkwụsị na Medjugorje. Mgbe ọ na-alaghachi Rome, o gosiri na usoro nyocha banyere ihe ngosi a zuru ezu.
N’ozi ụgbọ elu nloghachi nke nleta Marian nke Fatima na Mee 2017, popu kwuru banyere akwụkwọ ikpeazụ nke kọmishọn Medjugorje, akpọrọ mgbe ụfọdụ dị ka “Ruini Report”, mgbe onye isi kompeni ahụ, Cardinal Camillo Ruini na-akpọ ya " mara ezigbo mma 'ma na-achọpụta ọdịiche dị n'etiti ngwa Marian mbụ dị na Medjugorje na ndị na-esote ya.
O kwuru, "Epekele nke mbụ, nke e lekwasịrị anya na ụmụaka, akụkọ ahụ kwuru karịa ma ọ bụ na-erughị, na-ekwu na a ga-aga n'ihu na-amụ ihe," ka a na-ekwu na ntinye akwụkwọ nke ugbu a, akụkọ ahụ nwere obi abụọ, "ka popu ahụ kwuru. .
Ndị njem njem na Medjugorje belatara ọnụ ọgụgụ n'ihi nsogbu coronavirus. Radio Free Europe kọrọ na Machị 16 na oria ojoo a belatara ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa n'obodo ahụ, ọkachasị fromtali.
Poopu mechiri ozi ya na nzukọ ndị ntorobịa site n'ihota Christus vivit, ndụmọdụ agbamumeozi Apostolic na ntuliaka afọ 2019 maka ndị ntorobịa.
O kwuru, sị: “Ndị ntorobịa m hụrụ n'anya, nọgidenụ na-agbakwu ihu na ihu nke Kraịst, nke anyị hụrụ n'anya nke ukwuu, onye anyị na-efe n'otu nsọ dị nsọ ma mara anụ ahụ nke ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị na-ata ahụhụ. Ka Mụọ Nsọ gbaa gị ume ka ị na-agba ụdị agbụrụ a. Chọọchị ahụ chọrọ ịnụ ọkụ n'obi gị, echiche gị, okwukwe gị '”.
“N'egwuregwu a maka ozioma, nke a kwa site n'ike mmụọ nsọ a, a na m enyefe gị arịrịọ nke nwanyị nwanyị a gọziri agọzi, na-arịọ ìhè na ike nke Mmụọ Nsọ ka ị bụrụ ezigbo onye akaebe nke Kraịst. Ya mere, m na-ekpe ekpere ma gọzie gị, na-arịọ gị ka ị na-ekpekwa ekpere maka m ”.
← Na post gara aga Gara aga post:Saint Peter Julian Eymard, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 3
Ọzọ Post → Post ozo:Nwaanyị nke nnabata na ntinye uche n'ihe mgbu asaa ahụ